Goobaha Cunnada Kafeega Bulshada - Xarunta Agabka & Naafada (ADRC)
Qado ayaa loo heli karaa qadada ama soo-qaadista
Maxaad wax u karinaysaa marka aad qado macaan ka heli karto ADRC?
Casho-gelinta hadda waxay ka furan tahay ADRC! Soo qaadis ayaa wali diyaar u ah ADRC/goobta dhulka ah.
Goobaha Xiriirinta Curative-ka waa kuwo xiran bulshada.
Guryaha Mason Manor iyo Fort Howard waxay u furan yihiin dadka deggan oo keliya, iyada oo cuntooyin loo geeyo qolal gaar ah. Cunto urursi maleh
Ka daawo degelkan iyo / ama Facebook adrcbrowncountywi wixii ku soo kordha.
Ma u baahanahay Boos?
Ma jiraan wax boos celin ah oo lagama maarmaanka u ah dadka ka diiwaan gashan sidii cunto-qaateyaal ADRC Community Café oo ku taal Adams Street.
Waa maxay Qiimaha?
Buuxi foomka xubinimada cuntada si aad nooga caawiso inaan wax yar ka ogaano adiga oo aad ka faa'iidaysato deeqda si aad u bixiso qado $4 deeq ah dadka da'doodu tahay 60 iyo ka weyn. Qof kasta oo ka yar da'da 60 wuxuu ku raaxaysan karaa cuntadan koorsada oo dhan $10 (qiimaha).
Waxaan u dabaaldegeynaa wax gaar ah!
Maarj 2022, waxa ay xusaysaa 50-guurada ka soo wareegtay Xeerka Nafaqada ee Older Americans Act (OAA) - oo ay ku jiraan Barnaamijyada Cuntada Guriga iyo Kafeega Bulshada. Sannadkii 1972, OAA waxa la beddelay si loogu daro barnaamijka nafaqeynta qaranka ee dadka waaweyn 60 iyo ka weyn. Muddo hadda laga joogo 50 sano, barnaamijka nafaqeynta wuxuu taageero iyo madax-bannaani u fidiyay dadka waaweyn ee dalka. In kasta oo Maarso dhammaatay, waxaan sii wadi doonnaa inaan u dabaaldegno inta ka hartay sanadkan!
Fiiri liiskayaga billaha ah! Waxaa ku jira cuntooyin kala duwan dhadhan kasta. (Cuntada ADRC ee gaarsiinta cuntada guriga-ku-meel-gaadhka ah, Goobaha Bulshada, iyo Soo-qaadista.)
Eeg liiska bisha Juun
Eeg Menu-ga May
Beesha Kafeega Goobaha Qado
Café Community ADRC
300 S Adams St, Green Bay
La heli karo qadada iyo soo qaadis
Isniin - Jimco, 11 subaxnimo - 1 galabnimo
Boos celis looma baahna.
Kafeega Grounded wuxuu furan yahay 8 subaxnimo - 2 galabnimo ee qadada iyo soo-qaadista. Tag groundedcafegb.org ee liiska iyo macluumaadka dalabka onlineka.
Isniinta - Jimcaha, 11:30 subaxnimo - 12:30 pm
Wac (920) 593-3564 hal maalin shaqo usbuuc kahor kahor 11 am
(Deganeyaasha oo keliya)
Guryaha Fort Howard
141 N Chestnut St, Green Bay
Talaado & Arbaco, 11:30 subaxnimo - 12:30 pm
Wac (920) 448-4544 hal maalin shaqo usbuuc kahor kahor 11 am
Guryaha Mason Manor
1424 Maxkamadda Admiral, Green Bay
Wac (920) 492-4991 hal maalin shaqo usbuuc kahor kahor 11 am
Kheyraadka Cunnada ee Degmada Brown
Macluumaadka ku saabsan cayayaanka, cuntada bulshada, qeybinta cuntada, iyo barnaamijyada kale ee bixiya kaalmada cuntada.
Despensas de Alimentos iyo el condado de Brown
Un recurso con informacion sobre despensas de alimentos, comedores comunitarios, FoodShare y otras programas que proofen la Assistencia de comida.
Bixinta Cuntada & Qaadista
Liiska dukaamada raashinka ee laga bixiyo khadka tooska ah iyo taleefanka oo laga dalbado dukaanka soo-qaadista ama keenista.
Jawaabta Cuntada Bulshada ee Gurmadka Coronavirus
Liistada barnaamijyada cuntada bulshada ee bilaashka ah iyo isbeddelada ku yimaada howshooda deg-degga ah inta lagu jiro Gurmadka Coronavirus. Waxaa ku jira goobaha cuntada ee bilaashka ah ee da'da iskuulka.
Cunnooyinka si buuxda loo kariyey loo geeyey albaabkaaga
Liiska u diyaargarowga cuntada iyo bixinta. Dalbo cunnooyinka usbuuc walba la geeyo.
Barnaamij federaal ah ayaa loo sameeyay si loo joojiyo gaajada loona hagaajiyo caafimaadka iyo nafaqada. Waxay ka caawineysaa shaqsiyaadka u qalma dakhliga iyo qoysaska inay iibsadaan cuntada ay ugu baahan yihiin caafimaad wanaagsan. Nidaamka dalabka waxaa ka mid ah wareysi taleefan oo lala yeeshay Bay Lake Consortium iyo buuxinta codsi khadka tooska ah ah. Wac Bay Bay Consortium 1-888-794-5747 maanta si aad u hubiso u-qalmitaanka una buuxiso wareysigaaga taleefanka.